Radio Don Bosco - Raha mba nahalala izay hampiadana anao manko ianao
Raha mba nahalala izay hampiadana anao manko ianao
Alakamisy 19 nôvambra 2020 — Herinandro faha-33 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 19, 41-44 — Andriamanitra no nampihavana an’izao tontolo izao indray tamin’ny alalan’i Kristy sy nametraka indray ny teny fampanantenana tamintsika.
Rehefa mby akaiky ka nahita an'i Jerosalema i Jesoa dia nitomany, nalahelo, nampiseho ny maha olombelona azy, satria mba nanao izay ho afany Izy hampibebaka ny mponin'i Jerosalema, nefa tsy nihaino azy izy ireo. I Jerosalema mantsy dia nirina mba ho tananan'ny fiadanana araka ny voalazan'ny mpanao Salamo, izay hita ao amin'ny Salamo faha-122, nefa tsy tanteraka aminy izany. Indraindray tokoa , mety misy teny na fihetsika ataontsika, mampalahelo na mampitomany an'i Kristy mihitsy aza, eny andalam-piainantsika eny, indrindra moa raha tsy mihiano na tsy miraharaha ny teniny isika. Manao izay hahasambatra antsika mandrakariva anefa Izy, fa isika no saro-tiavina toa an'i Jerosalema. Koa mba diniho sy alalino àry, ny voalazan'i Masindahy Lioka eto, ary meteza hankato sy hanaraka an'i Kristy mandrakariva.